Waa maxay risography? | Hal-abuurka Online
Risography waa farsamada daabacaadda oo ilaa dhawaan aan la aqoon, laakiin waa uu soo korayay sanadihii ugu dambeeyay faa'iidooyinka ay leedahay awgeed. Marka laga hadlayo nidaamkeeda hawlgalka, waxa aynu odhan karnaa waxa uu la mid yahay kan koobiyeeyaha, ama daabacaha shaashadda. Mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu weyn ee nidaamkan ayaa ah inaadan u baahnayn inaad waqti badan ama hanti badan geliso. Iyaga oo haysta "ciladaha" daabacadooda, waxay natiijada ka dhigaan mid gacan-gacan lagu sameeyay.
Jaleecada hore, tani waa farsamo fudud, laakiin waa inaad tixgelisaa dhowr arrimood. Natiijada kama dambaysta ah waa mid cajiib ah, iyada oo ay ugu wacan tahay xoojinta midabada, qaabka iyo dhamaystirka qumman. Laakiin sidee baad u soo jiidataa taageerayaasha maalin kasta?
1 Waa maxay risography?
2 Sidee buu u shaqeeyaa risography?
3 Faa'iidooyinka risography
4 Shuruudaha isticmaalka risography
5 Diyaarinta Faylka
Maxay ka kooban tahay? la risography?
La Risography waa habka daabacaadda dhijitaalka ah ee xawaaraha sare leh ee dusha siman oo joogto ah. Waxaa sameeyay Riso Kagaku Corporation. Waxaa inta badan loo sameeyay in lagu sameeyo daabacaado waaweyn iyo koobiyo. Waxa kale oo loo yaqaan daabacaha-duplicator.
Sida risography, Khadadka monochrome waxaa loo isticmaali karaa sida fluorine pink iyo orange, dahab, guduud, jaalle, madow, iyo turquoise. Khadku waa daah-furan, maaha mid mugdi ah, markaa haddii aan ku dul daabacno midab kale, midab saddexaad ayaa la soo saari doonaa.
Sidee buu u shaqeeyaa risography?
"Master" ama template ayaa la sameeyay iyadoo lagu salaynayo asalkii uu sawiray mishiinku. Godadyada yaryar waxaa lagu sameeyaa nidaamka kulaylka waxayna u dhigmaan aagga asalka ah. Istaarku waxa uu ku duubaa durbaanka khadkii oo khadku waxa uu ka soo baxaa godadka yaryar. Marka uu durbaanku xawaare sare ku wareego, warqaddu waxay dhex martaa mishiinka gudihiisa si ay u hesho daabac.
Daabacaha loo isticmaalo tan waa mashiin leh rullaluistemadka stencil. Waxay ku socotaa xariiq toosan oo u eg, xariiq daabacan, gadaal iyo gadaal. Aragtida waxaa lagu sameeyay koronto aad u yar oo soo gasha walxaha iyadoo la kaashanayo lacag togan, mid taban, una corritaane by una línea eléctcodsi, una corritaane beddelkeedaa o corritaane si toos aha. Risography waxay ku daabacan kartaa noocyo kala duwan waraaqaha iyo cabbirrada, laakiin kuwan Waa inay ahaadaan kuwo aan dahaadhnayn oo aanay aad u dhumuc lahayn.
Tani waxay yeelan kartaa hal xariiq oo daabacan, taas oo ah, waxay daabacdaa hal xariiq oo keliya. Farsamadani waxay isticmaashaa khad aan lahayn resin, waxaa lagu sameeyaa saldhig soy ah, kaas oo aan ku jirin dareerayaasha kacsan. Waxa loo adeegsadaa soo saarista boodhadhka xayaysiisyada, buugaagta, kaadhadhka, fanziinnada, iwm.
Waad qaban kartaa orod gaaban oo qiimo jaban ah. Inkasta oo tirada koobiyada badan tahay, hoos ayuu u dhacayaa qiimaha nuqulkiiba.
Farsamadan ixtiraam deegaanka habka daabacaadda.
Printer-kan wuxuu cunaa tamar yar hab qabow awgeed.
Waa la helay qaybo runtii asalka ah.
Natiijadu waxay leedahay a 'gacmo lagu sameeyay' eeg oo la mid ah midda aan ku yeelan lahayn daabacaadda shaashadda.
Shuruudaha isticmaalka risography
Si aad u isticmaasho farsamadan waa inaad xisaabta ku dartaa dhowr arrimood:
Waa inaad samee dukumeentiyo dhijitaal ah oo gaar ah midab kasta. Dukumeentiyadani waa inay ahaadaan kuwo cawl ah ama waa in lagu sameeyaa iyadoo la adeegsanayo kala soocida midabka.
Inta badan, qaabka warqadda aad daabacan karto waa A4 ama A3. Inkastoo ay jiraan qaabab kale.
Noocyada dukumiintiyada ma qiraan daabacaadda dhiiga. Markaa aagga daabacaadda ee A4 wuxuu noqon doonaa 19 x 27,7cm halka A3 uu noqon doono 27,7 x 40cm.
Sida for Miisaanka warqadda tani waxay u dhaxaysaa 50 iyo 210g.
Si looga hortago khad ku urursan, calamadaha, ama saxmada ee daabacaha, waxaa fiican in la iska dhaafo tiro badan oo khad ah.
Markaad diyaarinayso faylasha dhijitaalka ah Si loogu diro shirkad daabacan waa inay ahaadaan qaab PDF, JPEG, Illustrator ama qaab InDesign ah. Waxyaabaha muhiimka ah ee maskaxda lagu hayo ayaa ah in xarfaha ay noqdaan kuwo raad raac ah iyo sawirro la dhexgeliyey. Mashiinka riso wuxuu u tarjumayaa midabada cawl si faylashaadu waa inay ahaadaan kuwo cawl ah.
Sidii aan horayba u soo sheegnay, midabada waa in sidoo kale lagu kala saaraa faylal ama lakabyo kala duwan. Haddii faylkaagu ka kooban yahay meelo badan oo khad ah, madowgu waa inuu lahaadaa mugdi 90% ah, sababtoo ah haddii aad bixinayso wax ka badan hal baas, saxmada waraaqaha ayaa laga fogaanayaa. Ugu dambayn, Waxaa lagugula talinayaa inaad u dirto natiijada kama dambaysta ah daabacaha, si ay u helaan hagaha shaqadaada.
Hadda oo aad wax yar ka ogtahay farsamadan iyo sida loogu diyaariyo in loo diro saxaafadda. Waxaad diyaar u tahay inaad tijaabiso oo aad abuurto qaybo gaar ah oo asal ah kuwaas oo aad la yaabto macaamiishaada mustaqbalka. Horay!
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Waa maxay risography?